Sina 2020 Mpanamboatra endrika vaovao maivana amin'ny fonosana fonosana matory fonosana ary mpanamboatra | Xueruisha
Kitapo fatoriam-piankohonana miloko an-kalamanjana miloko ...
Kitapo fatoriana tsy ara-dalàna valin-drihana roa stitching ...
Taratasy fatoriana azo zahana valopy tokana miaraka amina Co Co ...
Camouflage akorandriaka tantera-drano rip-mijanona milita ...
Fivarotana mafana famonoana rano tena tsara tantera-drano maman ...
Mpanamboatra 2020 ambony 90% ambany feno fatoriana ...
Fampakaram-bady ririnina ho an'ny olon-dehibe 2020
2020 Mpanamboatra endrika maivana famolavolana hazavana ...
2020 Mpanamboatra endrika maivana famenon-java-kanto azo entina amina kitapo fatoriana
Iray amin'ireo kitapo fatoriana malaza indrindra amin'ny fitsangantsanganana, bisikileta, valizy ary fitsangantsanganana, ny Light Luxury dia fitaovana ankafizin'ny fon'ny mpandeha an-tongotra sy ny backpackers, ary io koa no safidy lehibe indrindra ho an'ireo olona mitady hijanona ho mafana eo an-tampon'ny havoana mandritra amin'ny vanim-potoana rehetra.
Iray amin'ireo kitapo fatoriana malaza indrindra amin'ny fitsangantsanganana, bisikileta, valizy ary fitsangantsanganana, ny Light Luxury dia fitaovana ankafizin'ny fon'ny mpandeha an-tongotra sy ny backpackers, ary io koa no safidy lehibe indrindra ho an'ireo olona mitady hijanona ho mafana eo an-tampon'ny havoana mandritra amin'ny vanim-potoana rehetra. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny zaridaina, tokotaninao, zaridainanao, na aiza na aiza noeritreretinao. Raha mila mahatanty ny toetrandro mangatsiaka ianao dia io no vokatra tena manampy anao. Izy io dia mampiasa ny haitao fanjairana mandroso indrindra hanatsarana ny fihenan'ny vokatra ary hisorohana ny fidinan'ny ambany avy ao anatiny. Ity kitapo fatoriana ity dia manana habe 210 × 80cm lehibe ary mety amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Ny mari-pana ahazoana aina eo anelanelan'ny 1 7 ka hatramin'ny 7 ℃ dia afaka manome ny filan'ny lasy ivelan'ny trano isan'andro. Ny volavolan-tsoavaly sy kofehy adhesive vita amin'ny rivotra dia manatsara ny fiantraikan'ny rivotra sy mafana amin'ny kitapo fatoriana. Famolavolana fiarovana ny tarehy be olona kokoa, manome anao fiarovana feno. Mampiasa lamba 20-deniel Nylon Fabric izahay miaraka amin'ny fanoherana ny ranomaso, fanamafisana ary famonoana rano. Inona koa, ganagana 90% nidina ho fitaovana famenoana, izay fitaovana maivana sy mafana tokoa. Izy io dia afaka manampy anao hahatanty ny hatsiaka. Maivana, mora entina, Portable, haben'ny fonosana kely ary ny fahaizan'ny baffle mitohy mamela ny Light Luxury hifindra ao anatin'ny volana mafana kokoa ihany koa. Ho fanampin'izany, ity kitapo fatoriana ity dia lamaody sy mavitrika tokoa, ary manome safidy isan-karazany amin'ny loko, fomba, habe ary sns. Matoky izahay fa ho tianay ny vokatray sy ny serivisinay, noho ny nanoloranay ny ezakay rehetra hampivoatra sy hamokarana avo indrindra vokatra ivelany tsara. Ka tongasoa eto raha hijery ny tranokalanay sy hisafidy ny iray amin'izy ireo, mino aho fa tsy maintsy misy karazana iray izay afaka manome ny ilainao. Azonao atao koa ny mifandray aminay, raha misy fisalasalana momba ny vokatray.
Rehefa misafidy kitapo fatoriana, ankoatry ny fiheverana ireo anton-javatra fototra sasany (toy ny fampiasana kitapo fatoriana, hafanana, fitaovana famenoana, endrika, halavany, sns.), Dia mila mandinika koa ireo kitapo fatoriana izay hovidinao antsipiriany sasany. Raha fintinina dia misy karazany maro ny kitapo fatoriana, saingy toy ny fitaovana fanatanjahan-tena any ivelany dia ny lafo indrindra no lafo indrindra. Izay afaka mamaly ny filanao sahaza sy mifanentana amin'ny fanatanjahan-tena any ivelany no safidinao tsara indrindra.
Manaraka: Fampakaram-bokatra amin'ny ririnina ho an'ny olon-dehibe any an-tokotany 2020
Kitapo fatoriana azo zahana valopy tokana miaraka amin'ny Sol ...
2021 loko mamirapiratra malaza midina feno mamy ...
Valopy matevina feno splicable valopy tokana matory ...
Kitapo fatoriam-piankohonana miloko an-kalamanjana izay ...
Fampakaram-bokin'ny ririnina ho an'ny olon-dehibe 2020
Valin-drihana tsy voahaingo tsy voahaja amin'ny stitching ...